HAWIYOOW SOOMAALI MAXAY IDINKU OG TAHAY
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): HAWIYOOW SOOMAALI MAXAY IDINKU OG TAHAY
<!-Post: 120710-!><!-Time: 973166538-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Kayse<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 02:02 am
<!-Text-!> Salaan kadib mawduucaan waxaan u furay saakay markaan akhristay wararka oo tilmaamaya calaamado foolxun.
Maanta soomaali qabiil qabiil ayay udegantahay, hadaba hawiye maxaa ugaara
Kow madaxweynuhu waa iyaga dawladuna waxay marti u tahay iyaga, marka maxaa lagudboon.
Anigu hawiye maahi waana dad walaalahay ah dawlada cartana waan taageersanahay.
Maanta soomaali waxay wada eegaysaa dawladaas laakiin waxa dhabarka ka jebinaya waa idinka sidee?
Puntland& somaliland weerar laga sugi maayo tooda ayayna u tashanayaan, shaati guduudna awood mahayo, marka waxa keliya oo wiiqi karaana waa idinka waxa dhisi karaana waa idinka.
Laakiin dad wax fahmaaya ma aydaan tihin
uf iirso ciidan la xereeyay ayaa laba beelood ukala saftay aaway damiirkii maxaa idin dhalan rogay beri waxaan maqli doonaa ilaaladii madaxweynaha ayaa laba ukala safatay
waxaad tihiin dad tiro badan oo xoog leh laakiin inaad wax bur-burisaan maahee mataqaaniin sida umadna loo hogaamiyoo aduunkana wanaag loogu noolaado
Marka maantay waa tijaabadii labaad ama noqda kuwa bur-buriya dawladaan ama noqda kuwii dhisa.
hadaad bur-burisaan ogaada soomalida denbigaad ka gashaan inaan weligiin laydin cafinayn, tankale dadka kale tashade idinkana waa rajadii idiinku danbaysay.
<!-/Post: 120710-!> <!-Post: 120717-!><!-Time: 973167555-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>DAACAD<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 02:19 am
Hadaladaadu runtii waa mid qiimo leh, waana arkaa waxa jira , waxaan ahaynin wanaaga jecel, laakiin waxaa fiican inaadan HAWIYE oodhan aadan hadalka u jeedin ,ee aad lahadasho qabiilka habargidir, iyagaa madaxwaynuhu ka dhashay, iyagaana mucaaarad ah. <!-/Text-!>
<!-/Post: 120717-!> <!-Post: 121150-!><!-Time: 973203615-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Abdiaziz<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 12:20 pm
<!-Text-!> Waxaan kuu sheegayaa in hawiye ay ugu xoogbanyihiin soomaali oo dhan sanadkaan baa lo ogaaday siiba Habargidir waa qabiilka ugu awooda badan ayagaa dowladnimada ay ku xirantahay darood daba qurmuune ama faqashtii wadanka waa laga saarey oo meelkasta oo aduunyada ayey cayrka qaataan hadal ayaa kasoo harey waxaad araktaa in c/aahi yusuf wadnaha ayaa istaagi raba oo waaba jiradey.daaroodka waa dad aan shaqeysan oo afka ka hadla meelkasta oo ay aduunka joogaan aad ugu fiirso dowlad ladhaco sidii kuwii reerbadiyaha mareexaanka ahaa. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121150-!> <!-Post: 121160-!><!-Time: 973204984-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>qalanjo<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 12:43 pm
waryaa c/aziz dhoore ayaad tahay maxaa yeelay cheap adigoo kale ah waa layaqaanaa habargidir'ha faaninin'waa dad hoogay oo ba'aye mooryaanta. mida kale saad u hadleeyso'' siyaasi ma tihide isaga tag meesha xoog iyo xeelad midna ma lehe hadar gidire''''waa diirato'' aan aqoon si dadka loola dhaqmo mida kale waxaan kuu sheegaa dadka qaarkiis ayaa doowladaan raac sane hanoo bilaabin''habar gidiraa saas'eh iyo saas''bye'' <!-/Text-!>
<!-/Post: 121160-!> <!-Post: 121176-!><!-Time: 973206281-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Soomaali<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 01:04 pm
<!-Text-!> Hawiye waa dad habaaran oo inkaar Awliyo ku dhacday.
Dammiir haddii ay leeyihiin ma dileen dad nabad raadinaya oo iyaga u adeegaya.
Dammiir haddii ay leeyihin, marnaba kuma hagaageen in ay xabad u quudhaan Gen. Tallan oo waligii an hal qabiil danbi ka galin, ahna ninka ugu aqoon iyo siyaasad badnaa Generalada soomaaliyeed oo dhan.
Markii ay ninkaa dileen kaliya wax ma yeelin qabiilkii uu ka dhasahay iyo ehelkiisa, ee waxay indhaha ka rideen somaliweyn oo waligeed ninkaasi badali karin.
Annigu maanta rajo kama sugayo dawladda Muqdisho iyo C/Qaasim. Waanse jeclahay Soomaalinnimada oo waa dhiigayga iyo dhuuxayga, waanan jeclahay calanka buluuga ah. Ilaahayna waan u baryayaa goor iyo ayaanba inaan lahaano dal iyo dad midaysan.
Inta intaa ka horaysa waxan leehay, Hawiye faraha halagala baxo, oo ilaa iyo inta ay iyagu heshiinayan yaan loogu tagin meesha ay dadka ku qalanayaan <!-/Text-!>
<!-/Post: 121176-!> <!-Post: 121181-!><!-Time: 973206618-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>R. Waqooyi<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 01:10 pm
<!-Text-!> Ayaan daranaa Daarood waar ma afkay idinkaga hadhay. Maxaa denbigiinna iyo wasaqdiinna H/Gidir ugula galgalaneysaan. Idinkaa waddanka baaba'shay, magacii Somali diley. kala eryey umaddii nabadda u wada degenaa. hantidii qaranka xaday. H/Gidir waxba idin ma yeelin dambiginnii oo dad laga dhigay oo banaadiiq sita yaa idin baday hoogga. Maantana yagii baad ka tuugsanaysaan dawladnimo. Maba qirsanid waxad gashay markaa sidee qaladku u saxmayaa. Meel qaladaad xal ka raadineysaa. Waar "ACTION" iyo "REACTION" kala baro. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121181-!> <!-Post: 121859-!><!-Time: 973289584-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Qardho<!-/Name-!> Friday, November 03, 2000 - 12:13 pm
<!-Text-!> To Kayse: Oradoo Hawiye iyo nasab dhiman futada u dhigo Daciif fooqal daciif anigu waan ku aqaanaa cida aad tahay iyo meesha aad ka soo jeedid. Waryaa ma mooryaantaa ku wastay waa adiga ka daba naagaynaye. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121859-!> <!-Post: 121876-!><!-Time: 973290516-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Ali<!-/Name-!> Friday, November 03, 2000 - 12:28 pm
<!-Text-!> Qardho waad ogtahay adigoo gaajeesan in aad katimid bari abgaalna uu ku baray suugada in bariiska cadaa( waxaa tiri bari laga reesay bariis caano leh)lagu darsado majeerteen reer badiye. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121876-!> <!-End-!>